တစ်နှစ်တာ၏ 2020 ထုတ်ကုန် NAB ပြပွဲ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ
NAB သတင်းများ | ၂၀၂၀ NAB Show Media Partner နှင့် NAB ၏ထုတ်လုပ်သူ LIVE 2020 NAB Show News: တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးသတင်းများ။ NAB ပြရန် 2020 ။
Afrikaans Shqip አማርኛ العربية Հայերեն Azərbaycan dili Euskara Беларуская мова বাংলা Bosanski Български Català Cebuano Chichewa 简体中文 繁體中文 Corsu Hrvatski Čeština‎ Dansk Nederlands English Esperanto Eesti Filipino Suomi Français Frysk Galego ქართული Deutsch Greek ગુજરાતી Kreyol ayisyen Harshen Hausa Ōlelo Hawaiʻi עִבְרִית हिन्दी Hmong Magyar Íslenska Igbo Bahasa Indonesia Gaelige Italiano 日本語 Basa Jawa ಕನ್ನಡ Қазақ тілі ភាសាខ្មែរ 한국어 كوردی‎ Кыргызча ພາສາລາວ Latin Latviešu valoda Lietuvių kalba Lëtzebuergesch Македонски јазик Malagasy Bahasa Melayu മലയാളം Maltese Te Reo Māori मराठी Монгол ဗမာစာ नेपाली Norsk bokmål پښتو فارسی Polski Português ਪੰਜਾਬੀ Română Русский Samoan Gàidhlig Српски језик Sesotho Shona سنڌي සිංහල Slovenčina Slovenščina Afsoomaali Español Basa Sunda Kiswahili Svenska Тоҷикӣ தமிழ் తెలుగు ไทย Türkçe Українська اردو O‘zbekcha Tiếng Việt Cymraeg isiXhosa יידיש Yorùbá Zulu
Nippon Design Center, Inc. သည် TOVO ၏“ RHOMBUS” ဗီဒီယိုအတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် DaVinci Resolve စတူဒီယိုကိုအသုံးပြုသည်။
JP Delport သည် Broadcast Solutions UK သို့အရောင်းဒါရိုက်တာအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်
Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများ (MPSE) ကို 67th နှစ်ပတ်လည်ရွှေ Reel ဆုပေးပွဲကိုတင်ပြမည်
ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် 17 Live သည် LiveU နှင့်အွန်လိုင်းကြည့်ရှုခြင်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးစေသည်
Leeds Trinity တက္ကသိုလ်သည် Yorkshire Voice အတွက် Quicklink TX ကိုရွေးချယ်သည်
Crystal Vision သည် ST 2022 နှင့် ST 2110 နှစ်ခုလုံးနှင့်အလုပ်လုပ်သော IP gateway များကိုယခုပို့ပေးသည်
Intinor သည် SRT Alliance တွင်ပါဝင်သည်
Rising Sun Pictures မှအကောင်းဆုံးကားပြိုင်ပွဲ“ Ford v Ferrari” အတွက် Auto Racing Icon ကိုဖန်တီးသည်။
Xiaolu Xue ၏ Blockbuster“ Whistleblower” ကို Blackmagic ကင်မရာများဖြင့်ရိုက်သည်
Scale Logic သည်ဥရောပအရောင်းလုပ်ငန်းများကိုစီမံခန့်ခွဲရန် UK အခြေစိုက် Polar Graphics နှင့်တရားဝင်ပူးပေါင်းမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်
GRAVITY MEDIA ၏ယူကေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဦး ဆောင်ရန် ED TISCHLER
S&K Technologies, Inc. သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျှော်စင်များပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုရယူသည်။
728x90 အမှတ်သင်ပုန်း (Header ကို)
Signiant Webinar မှတ်ပုံတင်ခြင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » တစ်နှစ်တာ၏ 2020 NAB Show ထုတ်ကုန်
တစ်နှစ်တာ၏ 2020 NAB Show ထုတ်ကုန်
Podcast / ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ 2020 NAB ပြရန်။ ဤသည်Aprilပြီလ 2020 NAB ပြရန် မှာအရပျကိုယူပါလိမ့်မယ် Las Vegas ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာဖန်တီးမှုတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်နည်းပညာနောက်ခံများစွာရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဂေဟစနစ်သည်အတူတကွစုဝေးမည့်နေရာဖြစ်သည်။
အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအမြော်အမြင်ရှိသူများသည်အကြောင်းအရာများကိုအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနည်းများဖြင့်အသက်ဝင်စေရန်စည်းလုံးစေသောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်မီဒီယာ၊ ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာတို့အတွက် NAB ကိုကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့သောထုတ်ကုန်များနှင့်ကွဲပြားသည်။
တစ်နှစ်တာ၏ NAB ထုတ်ကုန်
ယခုနှစ်တွင်အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် ဒုတိယနှစ်ပတ်လည်ကျင်းပပါလိမ့်မယ် တစ်နှစ်တာ၏ NAB ထုတ်ကုန်။ 2020 ၏ရည်ရွယ်ချက် NAB ပြရန် Product of the Year ဆုသည်ပြပွဲတွင်ပြသသူများကပြသသည့်အထင်ရှားဆုံးနှင့်အလားအလာအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာအသစ်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်း Exhibitors ၂၀၂၀ မှာ NAB ပြရန်
အများအပြားမှာထင်ရှားတဲ့ပြသခဲ့သည်မှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပြ 2020 NAB ပြရန် ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်:
Imagine Products Inc.
Broadpeak ဒီဇိုင်းများနှင့်စေလွှတ်အကြောင်းအရာ Providers များနှင့်ကွန်ယက် Service Providers များအတွက်ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ် IPTV, Cable ကို, ဂြိုဟ်တု, OTT နှင့်မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ
Broadpeak ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်နှင့်နည်းပညာအစုစုတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
Broadpeak ရဲ့ စနစ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စျေးကွက်ဝေစုတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်ခွင့်ပြုသည်။ Broadpeak ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုမှသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းစီးဆင်းမှုသန်းပေါင်းများစွာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောကြီးမားသောပို့ဆောင်ရေးစနစ်များအထိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များအားထောက်ပံ့ပေးသည်။
Broadpeak မှာကျင်းပပါလိမ့်မည် တဲ SU8921.
25 နှစ်အတွင်းအဘို့, Imagine Products Inc. ရုပ်ရှင်နှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းရှိကျွမ်းကျင်သူများအား၎င်းတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရန်အဖြစ်ကူးယူခြင်း၊ မျှဝေခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ကူးယူခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည့်ဆန်းသစ်သောဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ မှထုတ်ကုန်များ Imagine Products Inc. အစွမ်းထက်၊ တတ်နိုင်သော၊ သုံးစွဲရန်လွယ်ကူသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤအထူးလုပ်ငန်းအသွားအလာလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများသည်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်သူများ၊ postproduction စက်ကိရိယာများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဒီဂျစ်တယ်ဗွီဒီယိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အားကိုးသောအသုံးပြုသူများအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောကိရိယာများဖြစ်လာသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က, Imagine Products Inc. ' အသုံးပြုခဲ့သည့် "အသစ်" ၏ဆောင်ပုဒ်ပေါ်တွင်ကစား:
Imagine ထုတ်ကုန်များ၏“ အခင်းအကျင်းအသစ်” ၏နောက်ကွယ်ရည်ရွယ်ချက်မှာကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိဖောက်သည်များအားကူညီရန်ဖြစ်သည်။ မှဖောက်သည်များ ကုန်ပစ္စည်းများမြင်ယောင်ကြည့်ပါ စတူဒီယိုကြီးများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်များမှလူတစ် ဦး ချင်းဆိုင်များနှင့်အလွတ်တန်းများအထိ။ ဒီနှစ် 2020 မှာ NAB ပြရန်, Imagine Products Inc. သည်အသုံးပြုသူ၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဆက်သွယ်ပေးမည့် cloud ဖြေရှင်းချက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
ShotPut Pro (ချခြင်း)
PreRollPost (LTFS မှတ်တမ်းတင်ခြင်း)
myLTO (LTFS backup) & ProVu (ဇာတိကြည့်ရှုသူ)
မှထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုခြင်း Imagine Products Inc. ဖောက်သည်လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုကြီးမားသောနှင့်အသေးစားထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ပိုမိုထိရောက်စေသည်။ Imagine ကုန်ပစ္စည်းများ Inc ကိုဖွင့်ကျင်းပလိမ့်မည် Booth SL13605 ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို Imagine Products Inc. ထွက်ခွာသည် www.imagineproducts.com.
Videon Central 4K နှင့်တစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း - အစွန်း developer အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို HD ကုဒ်။ ကုမ္ပဏီသည် prosumumers နှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအားမီဒီယာကိုမည်သည့်အရင်းအမြစ်မှမည်သည့်မျက်နှာပြင်သို့မဆိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော streaming ထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်အထူးပြုထားသည်။ Videon Central ၏ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗွီဒီယိုများကိုပိုမိုရိုးရှင်း။ ပိုမိုချွေတာနိုင်စေသည်။
Videon Central ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပွဲထုတ်လွှင့်ခြင်းစျေးကွက်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်သည့်အဖြေများကိုပြသပါမည် NAB ပြရန်။ ကုမ္ပဏီ၏အဓိကအချက်များမှာဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်အသစ်နှစ်ခုဖြစ်သည်။
EdgeCaster အစွန်းတွက်ချက် encoder ကို
အဆိုပါ VersaStreamer တစ်ပြိုင်နက်တည်း encoder နှင့် decoder နှစ်ခုလုံးအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည် local သို့မဟုတ် public network များအကြား streaming point-to-point ကိုပိုမိုရိုးရှင်းစေသည်။ HLS ၏ပံ့ပိုးမှုသည်ကွန်ရက်ပေါ်ရှိလက်တော့ပ်များ၊ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်စမတ်တီဗွီများသို့ streaming များပြုလုပ်နိုင်စေသည်။ Versastreamer သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ (RTMP) သုံးခုအထိတစ်ပြိုင်နက်တည်း streaming လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အမေဇုံက Web Services က
ဗီဒီယိုအလယ်ပိုင်း EdgeCaster အစွန်းတွက်ချက် encoder ကို အလုပ်များသောအများပြည်သူသုံးအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများအပေါ်စီးဆင်းသည့်တိုင်တောင်မှအနိမ့်ကျသော latency ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒါဟာအစအတူအလုပ်လုပ်တယ် AWS ဒြပ်စင် Videon Central ကိုသုံးစွဲသူများအား <3 စက္ကန့် CMAF လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုထောက်ပံ့ပေးသော AWS Technology Partner အနေဖြင့်။
Videon Central ကျင်းပလိမ့်မည် တဲ SU9322 ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကထွက်စစ်ဆေးပါ videon-central.com/.
NAB ပြရန် တစ်နှစ်တာဆုပေးပွဲ၏ထုတ်ကုန်
ဖြည့်စွက်ကာ အခြားကုမ္ပဏီများ ကြောင်း 2020 မှာပြလိမ့်မည် NAB ပြရန်, အ တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး NAB Show ထုတ်ကုန် အောက်ပါအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီတွင်ဖော်ပြထားသောဆုရရှိသူများကိုရရှိလိမ့်မည်။
AI / စက်သင်ယူ
ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, အလိုအလျောက်, Playout
Cloud Computing နှင့် Virtualization
ဂရပ်ဖစ်, တည်းဖြတ်ခြင်း, VXF, Switchers
အိုင်တီကွန်ယက် / အခြေခံအဆောက်အအုံ & လုံခြုံရေး
အဆိုပါ တစ်နှစ်တာ၏ 2020 ခုနှစ် NAB Show ထုတ်ကုန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်ကြေငြာမည်ဖြစ်သည်။ အခမ်းအနားကိုအခမ်းအနား၌ကျင်းပမည်ဖြစ်သည် Westgate ဟိုတယ်Ballroom A၊ ညနေ ၅း၃၀ မှည ၇း၀၀ နာရီအထိအနိုင်ရသူအမည်စာရင်းတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ကြေးမှာ ၀ င်ခွင့် / ထုတ်ကုန်တစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၂၉၅ ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီမဆိုထုတ်ကုန်တစ်ခုထက်ပိုသောအမျိုးအစားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။ သို့သော်ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ပေးသွင်းရမည့်ပုံစံရှိရမည်။ ဝင်ကြေးအခကြေးငွေပြန်မပေးရ။
2020 အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များသည် NAB ပြရန်, ထွက်ခွာသည် www.nabshow.com/.
ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သောမည်သည့်ဘာသာရပ်မဆိုကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်သုတေသနကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းအထိကျယ်ပြန့်သည်။ ငါနည်းပညာ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးခြင်း၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေးသားခြင်း၊ စာပေလေ့လာခြင်း၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၊ ပညာရေး၊ ဇာတ်လမ်းတို၊ အသစ်များကကမ်းလှမ်းအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံကြောက်လန့်ခဲ့ပါဘူး။
hor / andresbenatar /
Andres Benetar အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Actus Digitial မှရုပ်ပုံဖန်တီးခြင်းကို ၂၀၂၀ NAB ပြပွဲတွင်လေ့လာပါ - ဇန်နဝါရီလ 21, 2020
၂၀၂၀ NAB ပြပွဲတွင်မြက်ချိုင့်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပါဝင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန် - ဇန်နဝါရီလ 18, 2020
JVC သည် ၂၀၂၀ NAB ပြပွဲတွင်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောကင်မရာများကိုပြသမည် - ဇန်နဝါရီလ 16, 2020
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2020 NAB ပြရန် ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Broadpeak NAB 2015 NAB 2016 တစ်နှစ်တာ၏ NAB ထုတ်ကုန် NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB16 nabshow Videon Central	2020-01-02
နောက်တစ်ခု: Transmission Calibration Engineer အတွေ့အကြုံရှိသူ
Actus Digitial မှရုပ်ပုံဖန်တီးခြင်းကို ၂၀၂၀ NAB ပြပွဲတွင်လေ့လာပါ
၂၀၂၀ NAB ပြပွဲတွင်မြက်ချိုင့်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပါဝင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်
JVC သည် ၂၀၂၀ NAB ပြပွဲတွင်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောကင်မရာများကိုပြသမည်
Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများသည် ၆၇ ကြိမ်မြောက်ရွှေတံဆိပ်ဆုများအတွက်တင်ဆက်သူများကိုကြေငြာသည်
၂၀၂၀ NAB ပြပွဲသည်“ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံလွှင့်သူများဖြစ်ကြသည်” ပွဲတော်
Sony Pictures မှထုတ်လုပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည်“ Jumanji: The Next Level” အတွက်ကစားပွဲကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်။
ဧပြီလ 18 - ဧပြီလ 22
NAB News Feed တွေကို
Cartab-Sipp, Donilon, Johnson သည် NAB မှ EVP Stripes များကိုရရှိသည်
NAB COO Chris Ornelas ကို Beasley Media Group ၏အထွေထွေအကြံပေးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ NAB အစိုးရဆက်ဆံရေးဌာနမှူး Curtis LeGeyt သည် NAB COO သို့ရာထူးတိုးခဲ့သည်
မီဒီယာစျေးကွက်မတူကွဲပြားမှုနှင့်ပတ်သက်သောကြားနာခြင်းအိမ်ဆက်သွယ်ရေးဆပ်ကော်မတီတွင် Diane Sutter ၏ထောက်ခံချက်
NAB Show အလုပ်အမှုဆောင်ခေါင်းဆောင်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည်မျိုးကွဲများနှင့်ပူးပေါင်းမှုအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
တစ်နှစ်တာ၏ဒုတိယနှစ်ပတ်လည်ထုတ်ကုန်များအတွက်လျာထားလက်ခံသော NAB Show
PIRATE အက်ဥပဒေအထက်လွှတ်တော်ကျမ်းပိုဒ် NAB ထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၀ NAB Crystal Radio Awards ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုယခုဖွင့်လိုက်ပြီ
AT&T STELAR ဘလော့အားတုန့်ပြန်သော NAB ၏ထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် NAB ရုပ်မြင်သံကြားဥက္ကChairman္ဌ၏ချီးမြှင့်ခံရသည့်သရုပ်ဆောင်တယ်ရီ Crews သည်
broadcast ကို Maintenance Engineer အ
မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုတွဲဖက် - ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေး
ဓါတ်ပုံပညာ၏ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင် / ဒါရိုက်တာ
ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူ - အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်သူ
YouTube မိတ်ဖက် - အမျိုးသမီး - တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အပြင်ပန်းစွန့်စားမှု
အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် (Seasonal) - Disney Parks Live
728x90 အမှတ်သင်ပုန်း (Footer)
Broadcast Beat သည်တရားဝင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည် NAB ပြရန် အဆိုပါ 2020 မှာ LIVE NAB ပြရန် Las Vegas မှာ။ ကျနော်တို့ကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲ NAB ပြရန် မှာ Podcast စတူဒီယိုမှာ NAB ပြရန်.
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Broadcast Beat Magazine, LLC ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ ဤနေရာတွင်ပေါ်ထွက်လာသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မူပိုင်ခွင့်အားလုံးသည်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။